प्रहरी देखेर भागाभाग हुँदा जुवाडे घाइते - Samaya Sandarva
प्रहरी देखेर भागाभाग हुँदा जुवाडे घाइते
आईतवार, असार २२, २०७६ ०८:१० - समय सन्दर्भ
दाङ,असार २१ । जुवा अड्डामा प्रहरी पुगेपछि जुवाँडेहरु भाग्ने क्रममा एकजना जुवाँडे लडेर घाइते भएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ जसपुर निवासी धनबहादुर केसी प्रहरी पुगेपछि भाग्ने क्रममा लडेर घाइते भएका छन। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनको दाहिने घुँडामा चोट लागेको छ। केसीको हाल तुलसीपुरस्थित सिटी हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ । उनको घुँडा फ्याक्चर भएको हो वा होइन एकिनका साथ भन्न चिकित्सको रिपोर्टको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने एकजना प्रहरी अधिकारीले बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ तुहीखोलामा भइरहेको जुवामा प्रहरी पुगेपछि केसी भाग्न खोजेको र त्यही क्रममा उनी लडेर घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ । उनको घुँडा सुन्निएको हुँदा उपचारको लागि पठाइएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । शुक्रवार बेलुका साढे ८ बजेतिर एउटा घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले ७ जना जुवाडे पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ ।
उनीहरुको साथवाट १ लाख ६२ हजार रकम र खेलमा प्रयोग हुने कौडा समेत बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । पक्राउ परेका अन्य जुवाडेको नाम भने प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छैन । कस्को घरवाट ती जुवाडेलाई पक्राउ गरिएको हो ? त्यो पनि प्रहरीले खुलाएको छैन । पक्राउ परेका सबैलाई ईप्रका तुलसीपुरमा राखिएको छ । उनीहरु माथि जुवा ऐन शिर्षकमा मुद्दा चलाएर कानुनी उपचार खोज्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।